မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Android Phone အတွက် KBZ ဘဏ်အထွေထွေမှတ်စုဆော့ဝဲ(အသုံးဝင်၏)
Android Phone အတွက် KBZ ဘဏ်အထွေထွေမှတ်စုဆော့ဝဲ(အသုံးဝင်၏)
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရင် အတော်လေး အသုံးဝင်စေပါတယ်
မြန်မာပြည် ဘဏ်ခွဲအားလုံးရဲ့ လိပ်စာတွေ ၊ ဖုန်းနံပတ်တွေ ၊ တည်နေရာတွေကို
ဒီဆော့ဝဲလေးထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘဏ်ကထုတ်ပေးတဲ့ ကတ်တွေ
ထုတ်လို့ ရတဲ့ မြို့ နယ်တွေနဲ့ ဘဏ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေကို ဒီဆော့ဝဲကနေ
အလွယ်တကူ အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ပါပြီ ။ ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ဘဏ်တစ်ခုလုံးရဲ့
အသေးစိတ် အကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားလို့ရှိထားသင့်တယ်ထင်ပါ၏..။
ဒီလင့်မှာယူပါ - KBZ Bank Application ( Mediafire )
ဒီလင့်မှာယူပါ - KBZ Bank Application ( Play store ) ( Requires Android 2.3.3 )
မူရင်းလင့်မှာ Android 4.0 အထက်ပါ- http://www.bitmyanmar.com
KBZ Mobile Application offers youafast and simple way to:
-Find out about our services
-Locations of ATMs and Branches countrywide
-Notification of latest news
Daily Currency Exchange Rates and Calculator: Find out what the daily exchange rates between the local currency and foreign currency. Calculate the exchange amount that you would like to make with the exchange rate calculator by daily rates.
Author Anonymous at 9:50:00 PM